» साँझको बेला मुख्यमन्त्री पौडेल किन गए हेटौंडा अस्पतालमा ?
साँझको बेला मुख्यमन्त्री पौडेल किन गए हेटौंडा अस्पतालमा ?
२० मंसिर २०७५, बिहीबार १५:२०
हेटौंडा, २० मंसिर । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहिबार साँझ हेटौंडा अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण पश्चात मुख्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवामा धेरै सुधार भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड, प्रसुती वार्ड, ल्याब, एक्स रे वार्ड लगायत अस्पतालको भित्रको अवस्था अवलोकन गरेका थिए । उनले अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आएका नर्सिङका विद्यार्थीसँग अस्पतालका विषयमा जानकारी समेत लिएका थिए । विद्यार्थीहरुले काठमान्डौका विभिन्न अस्पतालमा काम गरेको बताउँदै हेटौंडा अस्पतालको सेवा सुबिधा राम्रो रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्माण भइरहेको भवनको समेत अवलोकन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले दिनको समयमा भन्दा रातको समयमा काम हुँदा अवरोध कम हुने भन्दै रात्रिकालिन कामको सुरुवात भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । अहिले अस्पतालको भवन निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने गरी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाईरहेको छ ।